16 padiki 250w 36v yemagetsi bhasikoro pamwe bhatiri mu seatpost r809b yakavanzwa pa Ebay Amazon - China Shenzhen Rooder Technology
16 padiki 250w 36v yemagetsi bhasikoro pamwe bhatiri mu seatpost r809b yakavanzwa pa Ebay Amazon
Collapses nokuti nyore - The shangu bhasikoro anoshandisa Aerospace aruminiyamu giredhi puranga & nyore anowiriranawo mumarori uye motokari kuti hukuru zvose. The motorized bhasikoro anoshandisa 36 V bhatiri & ane 250-watt injini kuti mirairo muna 3 hours.Ideal kuti usingashandi okuchengetera nzvimbo.
5 Pas akatasva System- Multi basa LCD vanoratidza, 12 pfungwa Switch uye FOC controller pamwechete nokubatanidza Pas system.You anogona kana motokari panguva chinoramba chichingorerutsa mitemo rudzi, kana panguva rwendo kudzora muoti pamwe kubva pedaling kana akachena bhasikoro muoti kana uchida mamwe exercises.The Switch aigona kuona ose chinangwa chaiyo
Uchiraira Everywhere- Izvi tsindirana E-bhasikoro bhatiri riri kuvanda pachigaro pambiru. Munokwanisa kuwana nazvo kubhadharisa nayo kwose uchida. Zviri nyore uye chiedza nokuda itakurwe nawo kunze.
Adjustable Electric Bike: Kunobvumira zvakawanda Chigaro kukwirira kugadziridzwa kuti aenderane mutasvi uye angafanirwa ane anokurumidza kusunungurwa kiramba kubatsira shangu nokukurumidza kuti bhasikoro
Patent Frame: The e-bhasikoro adopts 100 muzana aruminiyamu chiwanikwa puranga, pamberi forogo chakagadzirwa mukuru-simba pepuranga uye pamu shoma nyaradzo kuvhunduka Absorção de Água
Rooder 16 padiki 250w 36v yemagetsi bhasikoro pamwe bhatiri mu seatpost yakavanzwa kuwanikwa musi Ebay Amazon uye roodergroup.com
Frame: aruminiyamu puranga
Motor: 36V250W gearless injini
Kurambana: mberi & neshure Disc rotonhorera
Front uye neshure akatungamirira zviedza
Display: LCD vanoratidza
Pack size: 1320 * 650 * 260mm
Previous: Two vhiri asingapeteki akazotsiviwa nemapepa aipeteka yemagetsi sikuta pamwe kuturika r803p
2018 European inopisa kutengesa e-bhasikoro yemagetsi bicyc ...
Rooder citycoco caigiees r804i guru vhiri electr ...
asingapeteki akazotsiviwa nemapepa aipeteka maviri mavhiri 60V 2400W hunyambiri injini kure R ...